Izibuko zewayini ziyingxenye enkulu yesiko nemidlalo yaseshashalazini yewaini - enye yezinto zokuqala oziqaphelayo ngendawo yokudlela enhle, ikakhulukazi eyisitayela esentshonalanga - ingilazi elisetafuleni. Uma umngani ekupha ingilazi yewayini lapho ungena ephathini, ikhwalithi yengilazi ayiphathayo izokusho kakhulu ngewayini elingaphakathi.
Ngenkathi kungabonakala sengathi lokhu kubeka isisindo esiningi ngokwethulwa, empeleni ikhwalithi yengilazi inomthelela omkhulu endleleni ozwa ngayo iwayini. Ngakho-ke kufanelekile ukuchitha isikhathi esithile ukuqonda izimpawu ezibalulekile zekhwalithi ukuze uqiniseke ukuthi awuphuthelwa isipiliyoni esihle ngokusebenzisa i-glassware engafinyeleleki ngokujwayelekile.
Iphuzu lokuqala okufanele licatshangwe ukucaca. Njengalapho sinambitha iwayini, singasebenzisa amehlo ethu njengethuluzi lethu lokuqala ukwahlulela ikhwalithi yengilazi. Ingilazi yewayini eyenziwe nge-crystal (equkethe i-lead) noma i-crystalline ingilazi (okungekho) kuzoba nokukhalipha okukhulu nokucacisa okukhulu kunokwenziwe ngengilazi ye-soda lime (uhlobo lwengilazi esetshenziselwa amafasitela, amabhodlela amaningi nezimbiza). Ukungafaneleki njengamabhamu noma i-tint eluhlaza okwesibhakabhaka noma eluhlaza okwesibhakabhaka kungenye isibonakaliso sokuthi kusetshenziswe izinto ezingaphansi ezingavuthiwe.
Enye indlela yokubona ukuthi ingilazi yenziwa nge-crystal noma ingilazi ukudonsa ingxenye ebanzi kakhulu yesitsha ngethawula lakho lomunwe - kufanele yenze umsindo omuhle wokukhala onjengomsimbi. I-Crystal ihlala isikhathi eside ukwedlula ingilazi ngakho-ke mancane amathuba okuthi i-chip noma iphule ngokuhamba kwesikhathi.
Iphuzu lesibili okufanele licatshangelwe isisindo. Yize ingilazi ye-crystal ne-crystalline iminyene kuneglasi, amandla ayo ongeziwe asho ukuthi angashaywa kahle ngakho-ke izingilazi ze-crystal zingaba mncane kakhulu futhi zilula kunezingilazi. Ukusatshalaliswa kwesisindo nakho kubalulekile impela: isisekelo kufanele sibe esindayo futhi esibanzi ukuze ingilazi ingangeni kalula.
Kodwa-ke, isisindo sesisekelo nesisindo sesitsha kufanele kube ngokulinganayo ukuze ingilazi ikhululeke ukuyibamba futhi isishaye. Izingilazi zewayini ezi-embilisiwe ezisikiwe zivame ukuba zinhle ukubukwa kepha zengeza isisindo esiningi futhi zingasusa leli bhodlela engilazini.
Indawo yesithathu eyisihluthulelo sokubheka ikhwalithi yengilazi yewayini iyizingqa. Ulayini osongelwe, obonakala ngokusobala njengoba umkhulu kunesitsha esingezansi kwawo, unikeza okuhlangenwe nakho okucolisisiwe okuncane kunethambo le-laser-cut.
Ukuzwa lo mphumela ngokucacile, ihaba ngokweqile ngokuphuza newayini elisisigaxa esimanzi esinezindebe eziyindilinga: leli wayini lizobukeka limanzi futhi licinene. Kodwa-ke, umugqa wokusika we-laser uthambile kakhulu kunowokugoqa, ngakho-ke ingilazi idinga ukwenziwa ngaphandle kwekristalu yekhwalithi ephezulu ukuze iqinisekise ukuthi ayihambeki kalula.
Elinye iphuzu elithandekayo ukuthi ingilazi ishaywa ngesandla noma umshini ushaywa. Ukushaywa kwezandla kuwumsebenzi onobuciko obukhulu owenziwa yiqembu elincane ngokwedlulele lezingcweti eziqeqeshiwe futhi kuthatha isikhathi esiningi kunokushaywa umshini, ngakho-ke izingilazi ezishaywa ngesandla ziyabiza kakhulu.
Kodwa-ke, ikhwalithi yokushaywa komshini ithuthuke kakhulu ngokuhamba kweminyaka kangangokuba kulezi zinsuku izinkampani eziningi zisebenzisa imishini yokwenza amajamo ajwayelekile. Okwesimo esiyingqayizivele, noma kunjalo, ukushaya isandla kwesinye isikhathi kuyindlela kuphela njengoba kunokusiza kuphela ukudala isikhunta esisha somshini wokugabha kwengilazi uma umkhiqizo ugijima mkhulu.
Ithiphu yangaphakathi yokuthi ungabona kanjani umshini opheshulwe vs ingilazi eshaywa ngesandla ukuthi kungenzeka ukuthi kube ne-indent ecashile kakhulu ngaphansi kwesisekelo sengilazi eshaywa ngomshini, kepha kuvame ukubonwa ngababizi bengilazi abaqeqeshiwe kuphela.
Ukucaca nje, lokho esixoxe ngakho kuhlobana nekhwalithi kuphela futhi akuhlobene nesitayela noma ukwakheka. Mina uqobo ngizizwa nginamandla amakhulu wokuthi asikho ingilazi efanelekayo ewayinini ngayinye - ukuphuza iRiesling engilazini yeBordeaux uma uthanda ukuthi umphumela ngeke "uchithe" leli wayini. Konke kuyindaba yesimo, isimo kanye nokunambitheka kwakho siqu.
Uphuza izingilazi zewayini inkosi yeewayini uSara Heller amathiphu wekhwalithi ye-glassware indlela yokumisa ikhwalithi ephezulu ye-glassware
Ukuze ikunikeze umuzwa ongcono kakhulu, le webhusayithi isebenzisa amakhukhi. Ngeminye imininingwane, sicela ubheke inqubomgomo yethu yobumfihlo.